विवाहको रातनै भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेल गर्ने गिरोह सक्रिय!एक जनाले ७ जनासम्म पनि विवाह गरेको खुलासा!
एजेन्सी, पाकिस्तानमा आफ्नो नीजी जीवनलाई लिएर महिला साथै युवतीको चिन्ता बढिरहेको छ। अचम्म लाग्ने कुरा के छ भने अहिले कश्मीरका महिलाहरुलाई विवाहको लागि फसाउने गिरोह सक्रिय रहेको छ। ब्रिटिश-पाकिस्तानी नागरिकहरुसँग विवाह गरिने आस्वासन दिने गरिन्छ भने विवाह पछीको पहिलो रातको भिडियो बनाइन्छ, त्यस भिडियोको सहायताले ब्ल्याक मेल गरिने गरिन्छ।
द नेशनको रिपोर्टका अनुसार यस प्रकारको घतानको सिकार धेरै युवती भएको जनाएको छ। पाकिस्तानको मीरपुर इलाकामा यस प्रकारको मामलाहरू धेरै फेला परेको हो। पाकिस्तानी युवक जो बेलायतमा बस्ने गर्छन्,ति युवकहरुले राम्रो भविष्यको सपना देखाउने गरेको बताइन्छ। परिवारलाई समेत येही आश्वाशन दिने कुरा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
एक पत्रकार सम्मेलनमा ति पिडित महिलाहरुले आफ्नो पिडा मिडिया सामु पोखेका हुन्। उक्त ब्रिटिश-पाकिस्तानी ग्यांगका नाइके मुमताज उर्फ तेजा पहलवान रहेको महिलाहरुले बताए। मुमताजको विरुद्ध धेरै महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। अहिले सम्म यस ग्यांगको शिकार १५ भन्दा धेरै युवती भैसकेको आकलन गरिएको छ। ग्यांगका सदस्यहरु फसाएर विवाह गरेपछि अश्लिल भिडियो बनाएर दुख दिने गरेको तथ्य रहेको छ।
ती युवाहरु विवाह गरेसकेपछीसँगै बेलायत लैजान सिधै इन्कार गर्ने साथै सम्बन्ध बिच्छेद दिन पनि इन्कार गर्दै युवतीहरुको जिन्दगि बर्बाद गर्ने गरेको खुलेको हो। त्यस ग्यांगका नाइके मुमताजले मात्रै ७ युवतीसँग विवाह गरेको खुलेको छ। यस्तै अनवर नाम गरेक व्यक्तिले ५ साथै मुहम्मद नाम गरेका व्यक्तिले ३ युवतीसँग विवाह गरेको खुलेको छ। युवतीहरुलाई जवरजस्ती यौन कर्ममा लगाउने साथै लागुपदार्थ कारोबारमा प्रयोग गर्ने गरेको समेत पत्रकार सम्मेलनमा ती महिलाहरुले जानकारी दिए।
प्रकाशित : आइतबार, बैशाख २३, २०७५१२:३३
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सबै भन्दा पहिला प्रदेश ३ बाट शुरु गरिने ! यस्तो छ तयारी !
भारतले सिमा मिचेकाे भन्दै सर्वाेच्चमा रिट (पुर्णपाठसहित)
बस्नेतले पाए सफाइ..
पोखरामा फ्रान्सेली महिला मृत फेला